को हुन् सबैभन्दा अन्तिममा अफगानिस्तान छोड्ने अमेरिकी सैनिक ? – Classic Khabar
September 4, 2021 58
अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको सैन्य अभियान पूर्ण रुपमा फिर्ता भएको छ । अमेरिकी रक्षा विभागले एक तस्वीर जारी गरेको छ । तस्वीर जारी गर्दै विभागले तस्वीरमा देखिएका यी सैनिक अफगानिस्तान छाड्ने अन्तिम अमेरिकी सैनिक भएको बताएको छ । विभागले यी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यु भएको बताएको छ जो अफगानिस्तानबाट अमेरिका जान लागेको अन्तिम सी–१७ विमानमा चढ्दैछन् ।
उनको पूरा नाम क्रिस्टोफर टोड डोनाह्यु हो । उनी अमेरिकी सेनाका २ स्टार जनरल हुन् । उनी अहिले अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाको फोर्ट ब्रागमा रहेको ८२ औं एयरबर्न डिभिजनका कमाण्डिङ जनरल हुन् । आफ्नो करिअरमा क्रिसले अमेरिकी सेना र स्पेसल अपरेशन युनिटमा स्टाफ र कमाण्डिङ पोजिसनमा रहेर काम गरेका छन् ।
न्यूयोर्कको वेस्ट प्वाइन्टमा रहेको अमेरिकी सैनिक एकेडेमीबाट ग्रयाजुएसनपछि सन् १९९२ मा क्रिसले सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टको रुपमा इन्फेन्ट्री शाखामा काम सुरु गरेका थिए । उनको पहिलो असाइनमेन्ट दक्षिण कोरियामा सेकेण्ड इन्फान्ट्री डिभिजनमा प्लाटुन लिडरको रुपमा थियो । डोनाह्युले यो अवधिमा पूर्वी युरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण पश्चिम एसिया र अफ्रिकामा विभिन्न मिशनमा काम गरेका छन् ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextधमाधम नेपालमा सङ्क्रमण खोपको ट्रायल ?
२८ यात्रु सवार बस दुर्घटनाग्रस्त, १५ जना घाइते, कसरी भयो दुर्घटना ?
…उपचार गर्ने पैसा छैन’ भनेर प्रहरीलाई खबर गरेको केहि समयपछी प्रहरी घर पुग्दा दम्पतिकै भेटियो शव
निषेधाज्ञा उल्लंघनको आरोपमा तीन जनालाई एक महिना जेल
दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन (1222)
हाम्रो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली, अब मिलेर एमालेलाई बलियो बनाउँछौं : भीम रावल (994)
शिल्पालाई सपोर्ट गर्दै प्रकाशलाई कडा जवाफ,कोहिलाई दारा निस्केको भन्यो कोहिलाई मानसिक समस्यामा पुरायो (भिडियो सहित) (938)
रात दिन श्रीमानको शा रीरिक स म्प र्कको या तना सहन नसक्दा (871)
प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमा फर्किएकी रामकुमारी झाक्री र योगेशले गरे यस्तो घोषणा (830)
जस्तो गुरु तेस्तै चेला हुन किशोर खतिवडा,लक्ष्मीको कुनै हैसियत छैन श्रीजना वाग्लेलाई जथाभाबी भन्ने (भिडियो सहित) (787)
३ वर्ष पहिले बुवाको मृत्यु, अहिले आमा ले पनि संसार छोडिन् : बिचरा यी नाबालक हरुको बिचल्ली (752)
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (748)
बुवाआमाले छोरि कसरि गर्भवती भयौ भनेर सोधपुछ गर्दा दिदीले आफ्नै भाइलाई हेरेपछि…..! (743)
नायक किशोर खतिवडा आफुलाई गर्भवती बनाए भन्दै आरोप लगाउने लक्ष्मी गदाललाई भेट्न पुगे, भयो यस्तो बबाल (भिडियो हेर्नुस्) (740)
निखिलको पहिलो श्रीमती कोपिलाले दुखी हुँदै भनिन्, ‘कृपया पत्रकार जी ! गलत समाचार नछापे’
प्रिज्माले पहिलो पटक प्रेमका बारेमा खुलेर भनिन्, मैले प्रेममा कहिल्यै पनि सम्मान पाइन् सबै भन्दा बढी घृ णा उनैलाई गर्छु (भिडियो हेर्नुस्)
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन,२०७८ साल मंसिर २० गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर १९ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल